किन लाग्छ त रातमा बारम्बार पिसाब ? – Himalaya TV
Home » समाचार » किन लाग्छ त रातमा बारम्बार पिसाब ?
किन लाग्छ त रातमा बारम्बार पिसाब ?
१३ चैत्र २०७३, आईतवार २१:४९
काठमाण्डौ, १३ चैत्र । जापानी डक्टरहरुले भनेका छन् कि, रातमा बारम्बार पिसाव लागिरह्यो भने आफ्नो खानामा नुनको मात्रा कम गर्नुपर्छ ।
यस्तो समस्यालाई नौक्चुरिया भनिन्छ । यो रोगले विशेषगरी ६० वर्ष कटेपछि असर गर्न थाल्दछ । यसले गर्दा पीडित व्यक्तिको निद्राको साथै स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ ।
यो अध्ययन ३ सय जनाभन्दा बढि मानिसमा गरिएको अनुसन्धान अनुरुप हो । शोधकर्ताहरुले के पत्ता लगाएका छन् भने, जसले आफ्नो आहारमा नुनको मात्रा कम गर्छ उसलाई यो समस्या रातमा देखिदैंन ।
बेलायती डाक्टरहरु पनि यो कुराबाट सहमत छन् । उनीहरु भन्छन्, सही र सन्तुलित आहारको सहयोगमा यस्तो लक्षणलाई कम गर्न सकिन्छ । नागासाकी युनिभर्सिटीका डाक्टरले यो अध्ययन लण्डन युरोपियन सोसाइटी अफ युरोलोजी कंग्रेसमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जरुरतभन्दा पानी पिउनु पनि खतरनाक हुन सक्छ–
खानामा धेरै नुनको मात्रा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुमा लगातार ३ महिनासम्म निगरानी गर्दा के पाइयो भने, उनीहरु निद्राको समस्याबाट पीडित भएको पाइयो । फेरी उनीहरुलाई आफ्नो आहारमा नुनको मात्रा कम प्रयोग गर्न लगाइयो र पछि उनीहरुको रातमा पिसाब फेरिरहनुपर्ने समस्यामा पनि केही सुधार आयो ।
जो मानिसहरु रातमा दुई पटकभन्दा बढि पिसाब गर्दथे उनीहरुलाई एकपटकभन्दा बढि शौचालय जान परेन । त्यसको असर दिनमा पनि देखियो र यसले उनीहरुको जीवनमा पनि सकारात्मक सुधार भएको पाइयो ।
तपाईको पिसाबले बताउँछ, तपाई के खानुहुन्छ ?
यो अध्ययनमा ९८ जनालाई चाहिने भन्दा बढि मात्रामा नुनको प्रयोग गर्न लगाइयो र उनीहरुलाई रातमा बारम्बार पिसाब लाग्यो ।
आफ्नो आहारमा ठीक सन्तुलन गर्न सकियो भने जीवनलाई पनि ठीक बनाउन सकिन्छ । ब्रिस्टल युनिभर्सिटका प्रोफेसर मार्कस ड्रेक भन्छन्, ‘मानिस जति मात्रामा नुनको प्रयोग गर्दछ उति नै मात्रामा त्यसको प्रभाव शरीरमा पर्दछ ।’ सामान्यतया पानी पिउने मात्रालाई हेरिन्छ र सुत्न जानु भन्दा अघि कति पानी पिइन्छ, यसले पनि भूमिका खेल्दछ ।
५० वर्षपछि आधाभन्दा बढि पुरुष र महिलालाई रातमा ब्ल्याडर खाली गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा निद्रमा असर गर्दछ । यो सामान्यतया धेरै उमेर भएका मानिसहरुको समस्या हो, जसमा धेरै व्यक्ति रातमा दुईपटक उठ्ने गर्दछन् ।
व्यक्ति वृद्ध हुनुको असर–
उमेरको साथ हर्मनमा पनि कमि आउने गर्दछ र रातमा धेरै पिसाब लाग्ने गर्दछ । पुरुषको खाशगरी प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्न थाल्छ, यसले प्रोस्टेट ट्युबमा असर गर्दछ र यसले गर्दा बढि मात्रामा पिसाब लाग्ने गर्दछ ।
कति नुनको मात्रा बढि हो–
ब्रिटेनमा वयस्कहरुका लागि प्रतिदिन ६ ग्राम नुन खान सल्लाह दिइन्छ । यो २.४ ग्राम सोडियम बराबर हुनु पर्दछ । त्यसैगरी बच्चाका लागि ३ वर्षसम्म दिनमा २ ग्राम नुन खानपर्छ । ७ देखि १० वर्षसम्मका बच्चाका लागि ५ ग्राम नुन उपयुक्त हुन्छ । ११ वर्षभन्दा माथिका लागि प्रतिदिन ६ ग्राम नुन दिनुपर्दछ ।
रातमा के खानाले नुनको मात्रा बढि हुन्छ–
ब्रेड अर्थात अन्नको खाना अथवा नास्तामा हामी जति नुन छ भनेर सोच्छौ त्योभन्दा बढि मात्रामा नुन हुने गर्दछ । चिप्स, अथवा मसालेदार पदार्थमा पनि चाहिने भन्दा बढि मात्रामा नुन हुने गर्दछ । तसर्थ कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुपूर्व त्यसमा रहेको नुनको मात्रा थाहा पाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।